Maxaa dhaliyay khilaafkii Golaha Shacabka ee maanta? | Dhacdo
Maxaa dhaliyay khilaafkii Golaha Shacabka ee maanta?
Waxaa guuldarro ku dhamaaday kulan ay maanta qaban lahaayeen golaha shacabka ee barlamaanka federaalka kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha ay ku eedeeyeen guddoonka inuu qarinayo ajande aan ahayn kan la iclaamiyay ee ahaa in laga hadlo cudurka Covid-19.
Xildhibaannadaas ayaa sheegay in golaha dibaddiisa la keenay ciidamo dhar cad ah oo ka tirsan hay’adda sirdoonka balse xildhibaanno kale ayaa rumeysan in kulanku ahaa mid caadiya oo la mid ah kulamadii hore lagana doodi lahaa ajandaha qoran ee Covid-19.
Guddoonka baarlamanka ayaa markii dambe golaha isaga tagay sidaas ayuuna ku baaqday kulankii loo ballansanaa.
Haddaba mid ka mid ah xildhibaannadii diiddanaa fadhiga golaha inuu qabsoomo iyo Xildhibaan kale taageersanaa fadhiga maanta inuu qabsoomo ayaa BBC u warramay.
Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaannadi diiddanaa fadhiga golaha maanta inuu qabsooma wuxuu sheegay sababaha ay fadhiga uga soo horjeesteen iney ahayd ajndaha oo xilli munaasab ah aan xildhibaannada loo soo dirin maadaamaa xeer hoosaadka uu dhigayo in 24 saac ka hor la soo diro, guddiga joogtada iney ka fadhiistaan ajnadaha oo ay soo gudbiyaan, guddiga caafimaadka oo aan la soo marin ajndaha caafimaadka ee la shaaciyey iyo inuu ajndaha ahaa wax uu guddoomiyaha keli ah iska soo qortay.
“Ciidamada markaan aragnay waxaan u tagnay gudoomiyaha golaha annaga oo guddi ah waxaan ku dhahnay guddoomiye waxna waa la soo diray xildhibannana shalay wey hadlayeen oo waxay lahaayeen laba sana ayaan ku dhufsaneynaa, sideey wax u jiraan ciidamadanna naga saar xoog iyo juujuub hadduusan jirin ha laga hadlo labada sano lafteeda, wuxuuna nagu yiri ma saarayo ciidamada aniga ayey i ilaalinayaan anaana dalbaday ayuu nagu yiri” ayuu yiri Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil.
“Muuminka laba jeer god lagama qaniino, hadda ka hor inta la yiri guddi doorashaa laga hadlayaa wixi la sameeyey waa la ogyahay, anaga xildhibaannaan nahay walow aan kala aragti duwannahay saaxibba ayaan nahay oo waan isxan ognahay xaqiidaana ma seeggana cidwalba waxa laga shaqeynayana wey ogtahay waxa maanta meesha laga rabayna Extension (muddo kororsi) ayuu ahaa wax qarsoonna ma eheen” Ayuu yiri Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil.
Dhinaca kale Xildhibaanad Ubax tahliil Warsame oo ka mid ah xildhibaannada taageersanaa fadhiga golaha inuu qabsoomo oo BBC u warramay waxay sheegtay xubnaha la shaqeeya guddoomiyaha baarlamaanka kuraasti ay fadhiisan lahaayeen iney dhowr xildhibaan fadhiisteen halkaasina qashqashaad ka sameeyeen guddoomiyaha baarlamaanka marka uu arkay kursigi, makarafoonki iyo buriskiba lagu haysto uu ku dhawaaqay inuu baarlamaanka xiro.
“Baarlamanka maanta ayaa la furay sababta loo furayna waxay ahayd cudurka Covid-19 dalka aad iyo aad ayuu u sameeyey umadda aad bey ugu dhamaatay sidaa darteed ayaa baarlamaanka maanta loo furay si looga hadlo sidi arrintan wax looga qaban lahaa ajanda hoose oo qarsanaana ma jirin, dharcad joogayna ma jirto waa been abuur ay sameysanayaan isheydana wax ciidan ah ma qabanin ” ayey tiri xildhibaan Ubax Tahliil Warsame.
“Haddii ay wadahadallada socda ee arrimaha doorashada heshiisyo ka soo bixi waayaan oo la isku mari waayo baarlamaanka talada halkaas ayey u taallaa isha keli ee furan waa baarlamanka, baarlamaanka ayaan go’aan ka gaaraya maahanae wax go’aan qof gaari karaa ma jirto laakiin hadda waxa aan sheegi karo ma jirto.” Ayay tiri.
Guddoonka baarlamaanka marka uu fadhiga maanta golaha uu u qabsoomi waayey wuxuu sheegay xildhibaannadi ka dambeeyey in tallaabbo laga qaadi doono, halka ay xildhibaannada fadhiga maanta hor istaagayna ay sheegayaan iney waajib dastuuri ah oo saarnaa ay guteen balse uu isagu dastuurka ku tuntay, haddii sharciga uu ku tumanayana ay guddoomiyaha laftiisa mooshin ka keeni doonaan.
Muqdisho maxaa ka socda?
Shir u dhexeeyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta huteel ku yaalla magaalada Muqdisho uga furmay, shirkaasi looga hadlaya khilaafka harreeyay hannaanka doorashada ee Soomaaliya.
Waxaana shirkan ka qeybgalayaa madaxda dowlad goboleedyadda Koonfur Galbeed, Jubaland, Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle.
Shirkan ayaa kusoo begmayaa xilli dhawaan Muqdisho uu ka dhacay kulan u dhexeeyay madaxda dowladda, qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana kulankaas ka maqnaa madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubaland kuwaas oo horraan walaac ka muujiyay ammaanka goobta shirka lagu qabanayo.